चीन पेंच कारखाना र आपूर्तिकर्ताको सामान्य जानकारी | तन्सो
वर्तमानमा, चीनमा सामान्यतया प्रयोग हुने पेंच सामग्रीहरू 45 steel स्टील, C० सीआर, अमोनिएटेड स्टील, C 38CrMoAl, उच्च तापमान मिश्र, इत्यादि हुन्।
१) नम्बर 45 45 इस्पात सस्तो छ र राम्रो प्रसंस्करण कार्य गर्दछ, तर यसको पोशाक प्रतिरोध, जंग प्रतिरोध र बुढेसकाल प्रतिरोध कमजोर छ।
तातो उपचार: बुझियो र टेम्पर्ड hb220-270, उच्च आवृत्ति शून्य hrc45-48।
२) C०Cr को कार्य steel 45 स्टीलको भन्दा राम्रो छ, तर यसको क्रोमियमको क्षमता सुधार गर्न र प्रतिरोध धारण गर्न यसलाई प्राय: क्रोमियमको लेयरले प्लेट गर्नु आवश्यक हुन्छ। तर क्रोमियम प्लेटि layer लेयरको आवश्यकता बढी छ, प्लेटि layer लेयर धेरै पातलो र लगाउन सजीलो छ, धेरै मोटो, यो झर्नु सजिलो छ, तर झर्ने पछाडि, यसले क्षरणलाई गति दिन्छ, जुन कम प्रयोग भएको छ।
तातो उपचार: टेम्पर्ड hb220-270, हार्ड क्रोम मढ़ाइएको HRC> 55
)) नाइट्राइडिंग स्टील र C 38CrMoAl सँग उत्कृष्ट व्यापक कार्यहरू छन् र व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतया, नाइट्राइडिंग तह ०..4-०..6 मिमी हुन्छ। तर यस प्रकारको डाटाले कम क्षमता र उच्च मूल्यको साथ हाइड्रोजन क्लोराइडको क्षयलाई प्रतिरोध गर्न सक्छ।
)) सम्पूर्ण डेटा अर्को डाटा भन्दा उत्कृष्ट छ। डाटा प्लेट गर्नु हुँदैन। तिनीहरू मध्ये धेरै इन्जेक्शन मोल्डिंग मेसिनको कच्चा हलोजन-मुक्त स्क्रूमा प्रयोग गरिन्छ। डाटा उच्च एन्टी-ऑक्सीडेसन, विरोधी जंग र विरोधी बुढ़ापे प्रकार्य, र गर्मी उपचार hra55 and60 छ।
इंजेक्शन स्क्रू एक लामो समय को लागी उच्च तापमान, उच्च दबाव, उच्च मेकानिकल टोक़ र उच्च घर्षण वातावरण अन्तर्गत संचालित छ। पहिलो केही तत्वहरू प्रक्रिया सर्तहरू द्वारा आवश्यक हुन्छन्, र घर्षणको कारण हुने क्षति अपरिहार्य छ। सामान्यतया, स्क्रू सतह nitrided गरिएको छ सतह कडाई सुधार गर्न को लागी, कि, लगाउन प्रतिरोध सुधार गर्न को लागी। यद्यपि, यदि लगाउने कारणलाई बेवास्ता गरियो भने, यदि लगाउने सकेसम्म धेरै घटाइएको छैन भने, पेंचको परिचालन जीवन धेरै कम हुनेछ।
तल पेच पोशाकका कारणहरू र लगाउन कम गर्ने तरिकाहरूका बारे वर्णन गर्दछ
१. प्रत्येक प्लास्टिकको अभिलाषा प्लास्टाइजिंग प्रशोधन तापमान मापन हुन्छ। ब्यारेल प्रशोधन तापमान यस तापमान मापनको नजिक हुन नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। गेनुलर प्लास्टिकले हप्परबाट फिड ब्यारेलमा प्रवेश गर्दछ, र यो पहिले फिड सेक्सनमा पुग्नेछ, जसले अनिवार्य रूपमा सुक्खा घर्षण प्रदर्शन गर्दछ। जब यी प्लास्टिकहरू तातो को अभाव हुन् र पिघलने असमान हुन्छ, ब्यारेल भित्री भित्ता र पेंच को बाहिरी लगाव गठन गर्न सजिलो छ। त्यस्तै, कडा खण्ड र होमोजाइना section्ग सेक्सनमा, यदि प्लास्टिकको पिघलने अवस्था बिग्रेको छ भने, यसले बढेको पोशाक पनि बनाउँछ।
२. गति ठीकसँग समायोजित गर्नुपर्छ। किनभने केहि प्लास्टिकहरू फाइबरग्लास, खनिज वा अन्य फिलरहरू जस्तै सुदृढ पार्ने एजेन्टहरूसँग थपिएका छन्। धातु कच्चा मालमा यी सामग्रीको घर्षण प्राय: पिघलाएको प्लास्टिकको भन्दा धेरै हुन्छ। यी प्लास्टिकको इन्जेक्शनमा, यदि उच्च गतिको प्रयोग गरियो भने, प्लास्टिकमा कतरनी बलको सुधारले पनि त्यस्तै फाइबर फाइबरहरूलाई सुदृढ बनाउनेछ। क्रेडेड फाइबरको धारहरू अन्त हुन्छ र शक्तिशाली जोड दिन्छ। जब अजैविक खनिजहरू धातुको सतहमा उच्च गतिमा चिप्लन्छन्, तब उनीहरूको स्क्र्यापिंग प्रभाव सानो हुँदैन। तसर्थ, गति धेरै उच्च समायोजित हुँदैन।